"10 Faa'iidooyin oo layaab leh" oo laga helo 'Dabacasaha' Inbadan dadka ka mid ah ma yaqaanaan – Beegsonews-Wararka maanta
Home Caafimaadka “10 Faa’iidooyin oo layaab leh” oo laga helo ‘Dabacasaha’ Inbadan dadka ka...
“10 Faa’iidooyin oo layaab leh” oo laga helo ‘Dabacasaha’ Inbadan dadka ka mid ah ma yaqaanaan
Dabacasaha ee loo yaqaano “Beetroot”, ama dabacasaha, baytaraafka cas waxaa laga helaa faa iidooyin badan oo caafimaad bina aadamka, ha ahaato mid shiidan ama mid la goo gooyey, waxaa kujirto faaiidadiisa hagaajinta dheefshiidka iyo kor u qaadida caafimaadka wadnaha.
Xididdo, ama xididdo, waa khudrad inta hoose cas oo khudaarta inta hoose la cuno waxayna leeyihiin caleemo kor usoo baxa markuu baxayo Sida karootada oo kale
Beetroot ama baytaraafku wuxuu muhiim u yahay fitamiinnada iyo macdanaha, oo ay ku jiraan folate, manganese iyo potassium.
Halkan waxa aan kusoo gudbinaynaa 10 faa’iidooyin oo laga helo dabacasaha ama ‘beetroot’, sida lagu sheegay bogga “wararka dabiiciga ah” ee ku takhasusay arrimaha caafimaadka iyo caafimaadka.
1.Hagaajinta waxqabadka ciyaaraha fudud
Ciyaaraha fudud waxay isticmaalaan casiirka ‘beetroot juice’ si kor loogu qaado wax qabadkooda.Waxay wanaajineysaa socodka oksijiinta, hubinta dadaal yar oo loogu talagalay wadnaha iyo sambabbada inta lagu jiro howlaha cayaaraha.
dabacasuhu wuxuu kaa caawinaya daweynta Cudurada la xiriiraa xaalado caafimaad oo qaarkood, sida kansarka, cudurka wadnaha iyo buurnida. Beetroot waxay ka caawineysaa yareynta caabuqa iyadoo la xakameynayo habka calaamadeynta bararka.
Beetroot waxay hodan ku tahay fiber, sidaa daraadeed waxay u fiican tahay caafimaadka xiidmaha. In kasta oo ay ku jirto fiber-ka caloosha iyo xiidmaha yar-yar oo aan qodnayn, haddana waxay u dhaqaaqdaa xiidmaha waxaana soo saartaa bakteeriyada,
4.Hagaajinta caafimaadka maskaxda
Joojinta dariiqooyinka loo yaqaan ‘nitric oxide’ waxay la xiriirtaa cuduro badan oo garasho ah, sidaa darteed, amooniyam kujira xididdada ayaa kor u qaada shaqada maskaxda iyaga oo wanaajinaya socodka oksijiinta.
5.Dhiirrigelinta caafimaadka wadnaha
Khudaarta, sida xididdada, karootada iyo isbinaajka waxaa ka buuxa xeryo loo yaqaan Nitrate. Nitrate-ka waxaa loo beddelaa jirka nitric oxide gudaheeda. Nitric oxide waxay caawisaa furitaanka xididdada dhiigga, yareynta cadaadiska dhiigga iyo garaaca wadnaha.
6.Anti – kansar
Beetroot wuxuu kaa caawin karaa kahortaga kansarka, sababtuna tahay dhismayaasha antioxidant-ka, iyo la dagaallama unugyada waxyeelada leh. Betanine ee ku jira digaagga ayaa la rumeysan yahay inay leeyihiin guryaha ka hortagga kansarka.
7.kor u qaadida nidaamka difaaca jirka
Beetroot waxay hodan ku tahay fiitamiinada iyo macdanaha kor u qaadaya cudurada difaaca. Nafaqooyinkaas waxaa ka mid ah naxaas, zinc, fiitamiinnada A iyo C.
8. caafimaadka indhaha
Indhaha aadbuu ugu fiican yahay dabacasuhu waxay ciyaaraan door muhiim ah, oo ay weheliso miraha iyo khudradda ay ka buuxaan midabyo waxtar leh, joogtaynta caafimaadka indhaha, waxayna gacan ka geysaneysaa in laga fogaado xumaanshaha jirka ee la xiriirta da’da.
9.Ilaalinta caafimaadkaaga beerkaaga
Beetroot waxaa ku jira antioxidants, betaine, iron iyo vitamin B, nafaqooyin kor u qaada caafimaadka beerka. Bakteeriyada ku jirta, waxay ka caawisaa beerka inuu ka takhaluso sunta.
10.Hagaajinta wadista galmada
Beetroot wuxuu ka kooban yahay waxyaabo macdanta muhiim u ah si loo soo saaro hormoonnada galmada. Sida laga soo xigtay daraasadaha, casiirka dhir ayaa caawin kara daweynta unugyada erectile.
Previous articleEthiopia arrests elements of “al Shabaab” and “ISIS” planned attacks
Next articleMadaxweynaha Yemen Abd Rabbu Mansour Hadi wuxuu ku baaqayaa feejignaan dheeri ah si loo soo celiyo inta kale ee Yemen
Coronavirus inta uu ku dhacey iyo inta dhimatey Wadan walba Aduunka...